Cayaaraha England Premiership sida loo kala badiyay Sabtida - BBC Somali
Cayaaraha England Premiership sida loo kala badiyay Sabtida
Image caption Samir Nasri, oo goolasha Arsenal dhaliyay
Cayaaraha England Premiership Kooxda Arsenal waxay 2-1 kaga adkaatay Fulham.
Arsenal ayaa goolka ku hormartay oo daqiiqadii 14-aadba dhalisay goolka ay kaga hormareen Fulham oo marti u ahayd, wuxuu ahaa gool aad u qurux badan oo uu ku xarakeeyay cayaaryahanka Samir Nasri, balse daqiiqadii 30-aad ayaa Fulham ay keentay goolka barbardhaca oo uu u dhaliyay cayaaryahankooda Kamara.
Cayaarta ayaa qaybtii hore lagu kala nastay 1-1, inkastoo Arsenal ay ku gacan saraysay ay iska qasaarisay fursado dhowr ah oo gool la dhihi karay.
Fulham dardar kii hore ka xoog badan, ayay qaybtii labaad kula soo laabatay, hase yeeshee waxba uma soo kordhin.
Daqiiqadii 75-aad ayaa mar kale isla cayaaryahanka Samir Nasri ee Arsenal uu gool kii hore ka sii qurux badan uu ku hubsaday shabaqa kooxda Fulham.
Cayaaraha kale Birmingham iyo Tottenham, waxay isla dhaafi waayeen 1-1.
Chelsea iyo Everton 1-1 ayay iskula dhaceen Everton.
Man City waxay 1-0 kaga badisay Bolton.
Wigan iyo Stoke-na waxay ku kala baxeen 2-2.
Arsenal ayaa sidaasi hogaanka ku qabatay oo 32 dhibcood yeelatay, Manchester United oo horay u hogaaminaysay 31 dhibcoodna lahayd ma cayaarin, Barbardhaca Chelsea-na wuxuu keenay in hal dhibic ay la hoyato oo ay yeelato 30 dhibcood, iyadoo booska u banaysay Arsenal.
Manchester City kor ayay u soo kacday oo waxay yeelatay 29 dhibcood, Tottenham 26.
Waxaa ugu hooseeya Wolves iyo West Ham oo 12 dhibcood wada leh, iyadoo Wiganna ay labada koox ka korayso oo kaliya sadex dhibcood ayna ka mid tahay kooxaha ugu hooseeya liiska.